လင်းသန့်| February 7, 2013 | Hits:4,634
15 | | “ထောင်ဆွေး” ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ တကယ်တော့ စာဖတ်သူအများစုနဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့ စကားလုံးတော့မဟုတ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း ရုတ်တရက်နားလည်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီစကားလုံးက တော်တော်များများအတွက် နားစိမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ “ထောင်ဆွေး” ဆိုတာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲ နှစ်များစွာ ဘက်ပေါင်းစုံက ဖိအားတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာ၊ ရုပ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ငြိတွယ်လာရတဲ့ ရောဂါဆိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကြိုးတိုက် ဋီကာ (၉)
ကြိုးတိုက် ဋီကာ အပိုင်း (၁၃)
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Thet Khet Oo February 18, 2013 - 1:00 pm	I was wondering about the former political prisoners how are they coping all kinds or physical and emotional scars many times. What they had done for the country is unimaginable. Everyone is responsible to help them out I believe. I hope someone will start the foundation to help them out and sooner or later people will join to help it out like what Kyaw Thu is doing.